Lumbini Online | ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा मेरो पूर्ण ध्यान जानेछ’ - Lumbini Online ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा मेरो पूर्ण ध्यान जानेछ’ - Lumbini Online
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन आगामी शनिबार (यहि पुस २५ गते) हुँदैछ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षको रुपमा बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देहीले संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई अंगाडी सारेको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षको लागि चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएका श्रेष्ठसंग भावी योजना र चुनावी रणनीतिको बारेमा गरिएको कुराकानी ।
तपाईको चुनावी तयारी कस्तो छ ?
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको महाधिवेशन अंगाडी नै बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले मलाई प्रदेश अध्यक्षको रुपमा अंगाडी सारेको थियो । मलाई प्रदेशको अध्यक्षमा अंगाडी सारेपछि हामीले सबै समेटिनुपर्छ मन्ने मनसायले बुटवलबाट महासंघमा कुनै पनि दावी गरेनौं । त्यतिबेलादेखि नै हामीले प्रदेशको अध्यक्षको रुपमा आफूलाई अंगाडी सारेर प्रचारप्रसार गर्दै आएका छौं । जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघमा जाने साथीहरुसंघ भेटघाट गर्ने आफ्ना कुरा राख्ने र त्यहाका समस्याहरु के छन् ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु लिने काम भएको छ । त्यस्तै एशोसियटका साथीहरुसंग पनि उद्योग व्यबसायका नीति गत र व्यबहारिक समस्या के के छन्, र समस्याको समाधानका बिषयमा गम्भिर छलफल भएको छ । ती समस्याहरु समाधानको लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र सबै तहका सरकारसंग समन्वय गरि आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्नेकुराहरु राखेको छु । साथीहरु पनि मेरो उम्मेदवारीको विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
तपाईका भावी योजनाहरु के के छन् ?
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ नीजि क्षेत्रका उद्योगी व्यबसायीहरुको छाता संगठन हो । उद्योग बाणिज्य क्षेत्रको बिकास र व्यबसायमैत्री वातावरण निर्माणमा मेरो पूर्ण ध्यान जानेछ । लगानीमैत्री वतावरण निर्माण र लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई जोड दिएको छु । संगसंगै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको सदस्यता प्राप्त गरेका तर महासंघमा सदस्यता नपाएका प्रदेश भित्रका स्थानीय उद्योग बाणिज्य संघलाई महासंघको सदस्यता दिलाउने काम गर्नेछु । त्यस्तै स्थानीय तहमा आर्थिक रुपमा कमजोर उद्योग बाणिज्य संघहरुलाई दिगो स्रोतको व्यबस्थापनको लागि स्थानीय सरकार र महासंघसंग समन्वय गर्नेछु । प्रदेश भित्रका तुलनात्मक हिसावले आर्थिक रुपमा सवल उद्योग बाणिज्य संघ र नयाँ उद्योग बाणिज्य संघ बिच आपसी समन्वयको वातावरण निर्माण गर्नेछु ।
तपाई प्रदेशको अध्यक्षमा चुनाव जित्नुभयो भने १, २, ३ गरि भन्नुपर्दा तपाईका प्राथमिकता के के हुनेछन् ?
१, प्रदेश भित्रका आर्थिक बिकासका सम्भावना बोकेका सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन तथा ती क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने योजना बनाएको छु । त्यसको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघसंग समेत समन्वय गरिने छ ।
२, नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालनको लागि पहल, सरकारी निकायमा पैरवी तथा कृषिजन्य उद्योग व्यबसायको लागि सहज वातावरण निर्माण गरिने छ ।
३, औद्योगिक विकासको लागि तराईका जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनको लागि धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार बिकासको लागि पैरवी गर्ने र ती क्षेत्रको प्रवद्र्धनको काम गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छु ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनुभएको छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नभएकै हो ?
मुलुकमा अहिलेपनि लगानीमैत्री वातावरण छैन । हामीले स्थायी सरकार भयो भने लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने ठूलो अपेक्षा गरेका थियौं । तर त्यसो हुन सकेन । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दा पनि भएका उद्योगी व्यबसायीलाई कर मात्रै थोपर्ने काम गर्यो, जसका कारण भएका उद्योग व्यबसाय पनि झन् झन् धराशायी हुदै गएका छन् । त्यसमाथी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले झनै समस्या सिर्जना भएको छ । अव यसरी हुँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि लगानी अपरिहार्य छ । लगानी प्रवर्द्धनको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनै पर्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको लागि हामीले पहल पैरवी गर्ने छौं । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र उद्यमशिलताको बिकास र नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन हाम्रो मुख्य एजेण्डा हो ।
युवा उद्यमी व्यबसायीको बारेमा के सोंच्नु भएको छ ?
मैले उद्यमशिलता बिकासको योजना बनाएको छु । बिशेष गरेर युवामा उद्यमशिलता बिकासको लागि प्रत्येक जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघमा नेपाल युवा उद्यमी मञ्च (एन.वाई.ई.एफ.) गठन गरिने छ । एनवाईईएफका माध्यमबाट युवामा उद्यमशिलता तथा व्यबसायिक बिकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
अन्त्यमा, तपाईका केही कुरा छुटेका छन् की ?
संघीयता लागु भएसंगै सरकार र नीजि क्षेत्र बिचको संवाद, समन्वयमा कमी आएको महशुस भएको छ । खासगरी नयाँ संरचनाको रुपमा रहेको स्थानीय र प्रदेश सरकारसंग स्थानीय आर्थिक बिकास, व्यबसायिक वातावरण, नीजि क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणको लागि पहल गर्नेछु । प्रदेश स्तरमा तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र पहिचान र प्रवर्द्धनको लागि प्रदेश सरकारसंग पहल गर्नुको साथै जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्व तथा संस्थागत बिकासमा विशेष जोड दिदै म भन्ने होइन समुहगत छलफलमा सहभागि गराइ हामी भन्ने भावनाको अनुभुति गराउने छु ।